Misaotra an'i Rivsoft afaka milalao Diablo am-boalohany amin'ny findainao | Androidsis
Ahoana ny fomba filalaovana ny Devoly tany am-boalohany amin'ny findainao Android
Ankasitrahana ny andro toy izao satria nisy nametraka ny batery Mitondrà devoly tany am-boalohany ho eo amin'ny finday Android. Ary manontany tena izahay ny tena antony tsy misy seranan-tsambo toy izao ho an'ny finday.
Tena sarotra ve ny manome fanomezana ho an'ny mahatoky ny saga ary ento tahaka ny nataonao Bethesda miaraka amin'ny Doom sy Doom 2? Avy amin'ny tranonkala izay hampianarinay anao dia ho azonao atao ny milalao ny Diablo tany am-boalohany miaraka amin'ny traikefa ara-dalàna tonga lafatra mba hankafizanao ny votoatin'ny iray amin'ireo ARPG tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra. Ataovy.
1 Ny kinova Diablo
2 Ahoana ny fomba filalaovana Diablo voalohany amin'ny Android anao
3 Aiza ianao ry Blizzard?
Ny kinova Diablo
Izahay dia miresaka momba ny fahafahanao milalao ny Devoly mitovy amin'ny findainao amin'ny alàlan'ny rohy Internet izay ahafahanao misintona ny kinova "mizara", izay Voafetra ara-lojika io na dia afaka miditra ao an-trano-maizina aza ianao, mamono tsy mijanona, avo lenta ary mihaona amin'ny endri-tsoratra angano indrindra amin'ity andiany ity, ary ny fananana ny rakitra lalao DIABDAT.MPQ tany am-boalohany dia azonao atao ny mandefa azy amin'ny atiny rehetra ary tsy misy fetra.
Izany hoe, tsy mamporisika anao izahay hilalao kopia piraty, mankany amin'ny kinova Rivsoft shareware Voafetra amin'ny filalaovana ny kilasy mpiady fotsiny, voafetra ny fidirana amin'ny trano-maizina, ary misy vondron'olona tsara izay tsy hahafahanao manao resaka na miditra amin'ny iraka ampanaovina azy ireo.
Rivsoft dia nanazava fa ity kinova shareware ity miaraka amin'ireo bibikely voalohany, noho izany aza dia manao azy ho kinova kely manokana ary izay mpankafy ny andian-dahatsoratra dia te-hilalao azy noho ny antony maro hafa izay takany ihany.
Ahoana ny fomba filalaovana Diablo voalohany amin'ny Android anao
Ny fanaraha-maso ny fikitika dia miasa tanteraka ary marina izany afaka minitra vitsy dia tafiditra tanteraka ao Diablo ianao nefa tsy dia mahatsikaritra fahasamihafana. Raha milalao amina vahaolana tsara ianao dia ho afaka hamoaka kely azy, ary raha manana ny Diablo tany am-boalohany tsaratsara kokoa ianao. Afaka mahita ny tany am-boalohany ianao manodidina ny 9 euro.
Manana ny safidy hampiasana lakile maromaro sy ny totozy ianao ary tantanana amin'ny alàlan'ny fanindriana eo amin'ny efijery ny fanahafana ireo tsindry nomenay azy ireo tao amin'ny Diablo. Ianao dia tokony manangona volamena ny tenanao, manafika ny vahoaka Avoahy izy ireo ary ampiasao ny sari-tany hijerena ireo trano-maizina. Ny tena marina dia fampialana voly afaka mankafy azy toy izao avy amin'ny Diablo amin'ny finday. Izay homenay ho an'ny kinova an'ity tranonkala ity ho an'ny finday amin'ny vidiny mitovy ... (grrr).
Mandeha amin'ity tranonkala ity izahay: d07riv
Azontsika atao ny misafidy ilay rakitra tany am-boalohany izay ananantsika amin'ny findaintsika handefasana ny lalao feno "Select MPQ".
Na tsindrio fotsiny ny Play Shareware ary hanomboka hameno ny lalao izy io mba hahagaga antsika. Napetratsika tamin'ny fomba mivelatra izy io ary ho vonona isika.
Ho hitantsika ny fomba ento ny efijery Diablo, ho tonga amin'ny efijery fandraisana izahay ary afaka misafidy kilalao mpilalao tokana isika. Hiseho amin'ny tanàna izahay ary afaka manomboka ny dianay. Azonao atao ny miakatra raha miditra amin'ireo trano-maizina ianao, na dia tsy manoro hevitra anao aza izahay hampihena ny haavony ao aminy, satria hiala amin'ny lalao ianao.
Aiza ianao ry Blizzard?
Zava-misy iray manontolo an'ny Diablo eo imasontsika mba hankafizantsika ny iray amin'ireo angano amin'ny lalao video. Ary manontany indray izahay aiza ny faniriana hitondra lalao mitovy amin'izany, Lafo be ve izany?
Mpilalao maro izahay izay mitady hitazona ireo traikefa ireo amin'ny finday ary mamadika an'arivony heny amin'ireo RPG navoaka tao amin'ny Play Store tato anatin'ny taona vitsivitsy. Maro no kopian'ny Diablo tsy misy fanahy fotsiny ary bebe kokoa, noho izany dia hankasitrahana raha toa ka Blizzard, fa tsy mitady safidy hafa, no afaka manamboatra azy ary mitondra tena Devoly, tsy ilay devoly tsy mety maty hivily lalana amin'ny iray amin'ireo sagas mahazatra indrindra.
Aza mandany fotoana ary andramo ny Diablo voalohany amin'ny findainao Android alohan'ny hamoizanao ny faniriana hilalao Diablo bebe kokoa amin'ilay iray izay efa ho lavo ary izay mankany amin'ny freemium.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ahoana ny fomba filalaovana ny Devoly tany am-boalohany amin'ny findainao Android
Ny Xiaomi Mi MIX 4 dia hanana famahanana tsy misy tariby
Samsung mijanona ary Apple dia latsaka eo an-tampon'ny varotra manerantany